Al-Shabaab oo war ka soo saartay Weerarka lagu qaaday Hoteelka SYL ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo war ka soo saartay Weerarka lagu qaaday Hoteelka SYL ee...
Al-Shabaab oo war ka soo saartay Weerarka lagu qaaday Hoteelka SYL ee Muqdisho
Maleeshiyaadka Al-Shabaab /Sawir hore
Muqdisho (Halqaran.com) – Al-Shabaab ayaa ka hadlay weerarka Caawa dagaalyahano ka Tirsan Ciidankooda ay ku qaadeen Hoteelka SYL oo ku yaala meel ku dhow madaxtooyadda Soomaaliya.
War kasoo baxay Ururka Al-Shabaab oo lagu baahiyay warbaahintooda ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka tirsan Shabaab ay hoteelka weerareen, islamarkaana ay gudaha ugu jiraan, ayna wadaan toogasho loo geysanayo Saraakiil iyo Mas’uuliyiin kale.
Al-Shabaab ma aysan sheegin ragga ay ku dileen Gudaha Hoteelka SYL, iyo Tiradda ay dileen, balse waxa ay sheegeen in weerar qorshaysnaa ay ku qaadeen.
Wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco Halqaran.com.
Al-Shabaab oo sheegtay weerarkii SYL
toogasho ka socota hotelka SYL. wararkii ugu dambeeyay